FAMPISEHOANA NISEHOAN-DOZA : Olona telo maty, am-polony naratra tamin’ny fifanosehana tao Ambatondrazaka
Tovovavy roa sy tovolahy iray maty voahitsakitsaka nandritra fifanosehana teo ambava hadin’ny Espace Laza ao Ambatondrazaka, ny alatsinainy hariva teo. 3 mai 2018
Am-polony kosa ireo naratra tonga teny amin’ny hopitaly ao an-tanàna, ka ny efatra tamin’ireo dia miady amin’ny fahafatesana raha toa ka ny alin’io ihany dia afaka nody izay nahazo fitsaboana sahaza azy. Raha ny loharanom-baovao dia i Jean Aimé sy Elidiot no nanatanteraka fampisehoana tao an-toerana.
Voalaza fa taorian’ny fampisehoana handeha hody iny indrindra no raikitra fifanosehana teo am-baravarana fivoahany ka nahatonga ny loza namoizana aina izao. Voalaza fa noho fahataran’ny famoahana ny vavahady be fivoahana no niteraka ny fifanosehana sy fifanjevoana ary fifanitsakitsahana ka namoizina ain’olona sy naharatrana olona maro izao.
Fifanjevoana tao amin’ny toeram-pitsaboana tao Ambatondrazaka nandritra fiton drana ireo naratra satria tsy naharaka ihany koa ny mpitsabo tao an-toerana noho ny habetsaky ny olona naratra sy liana tamin’ny zava-nitranga. Araka loharanom-baovao dia tsy vao sambany fa matetika isehoana tranga mamohehatra toy izao ny fampisehoana atao any an-toerana ary misy aina afoy ihany koa.
Tovolahy 18 taona nanolana an-jandriny vavy 06 taona voasambotra ANATIHAZO-ISOTRY (366) 25 janvier 2021 Ho azo tanterahina eto Madagasikara ny fandidiana famindrana voa FIANGONANA SY NY FANJAKANA (98) 25 janvier 2021 Niakatra 442 ny marary vaovao, 06 ny namoy ny ainy FIVOARAN’NY COVID-19 (90) 25 janvier 2021 Mikatsaka ny fampidinana ny vidin-jiro sy rano eto Madagasikara FILOHA ANDRY RAJOELINA (73) 25 janvier 2021 Mpanendaka miisa 06 sy mpifoka rongony roa saron’ny Polisy ASAN-JIOLAHY ETO AN-DRENIVOHITRA (69) 25 janvier 2021 Tonga ireo fitaovana vaventy fanaovan-dalana FANOMEZANA FAHALEOVAN-TENA NY FARITRA (55) 25 janvier 2021